IFTIINKACUSUB.COM: Qisso yaab leh: Maxaa kala qabsaday Libaaxa iyo Saxaabada Rasuulk.
Qisso yaab leh: Maxaa kala qabsaday Libaaxa iyo Saxaabada Rasuulk.
Qisadii Safiina Mowla Rasuul Allah:Safiina wuxuu ahaa adoon ay leedahay Umu-Salama (I.R.H), kadibna way xoreysay oo waxay ku sardiday inuu u adeego nabiga (scw). Safiina wuxuu noqday shaqaalaha nabiga, ee marba wixii uu nabigu u baahdo u keena, sida waysada, kabaha, go’a iwm.
Safiina wuxuu yidhi: magacan Safiina waxa ii bixiyey nabiga (scw), oo maalin ayaa nabiga iyo saxaabadiisu ay baxeen kadibna alaabtii ayaa ku cuslaatya kolkaasbuu igu dhahay: "kala bixi go’aaga" kadibna waan kala bixiyey oo waxa lagu riday alaabtii, markaasu igu dhahay: "xanbaar adigu waxaad tahay Safiina (markab)", wuxuu yidhi Safiina: hadaan maalintaa qaadi lahaa alaabta la saaro laba halaad ama shan halaad ama lix halaadba waan qaadi kari lahaa.
Safiina waxa kale oo yidhi: Anigoo ku safraya doon ayey doontii xumaatay oo ay dagtay, markaasaan qabsaday loox oon ku dabaashay, kadibna waxaan kusoo caaryey meel kayn ah oo Libaaxyo joogaan, markaasaa libaaxii iga soo horbaxay, markaasaan ku dhahay: "Libaaxow, anigu waxaan ah Safiina mowlihii Rasuulka, markaasuu Libaaxii madaxiisa uu ruxay, isagoo i difaacaya wuxuuna igu soo hagay oo i keenay wadadii aan rabay, kadibna intuu hamham leeyey ayuu dhaqaajieyey, waxaana aqoonsaday inuu i sagootinaayey. 
Saxaabadii iyo ciidankii muslimiintu waxay dhaheen hal mar " Allahuakbar, libaaxii islaamka ayaa dilay libaaxii faarisiyiinta". Markuu Sacad maqlay in wiilkii adeerka uu ahaa uu la yimid mucjisadaas ayuu madaxa ka dhunkay, markaasuu Haashimna adeerkii lugaha ka dhunkaday.
Wax diyaariyey .Sheekh Abdulaziz Mohamed Oogle